१० एसईओ कपिराइटिंगका लागि सुझावहरू जुन स्तरहरू | Martech Zone
१० एसईओ कपिराइटिंगका लागि सुझावहरू जुन स्तरहरू
सोमबार, डिसेम्बर 23, 2013 सोमबार, डिसेम्बर 23, 2013 Douglas Karr
गत हप्ता हामीले करीव writers० लेखकहरूसँग हाम्रा एक ग्राहकमा भेट्यौं र छलफल गर्यौं कि उनीहरूका सामग्री लेखकहरूले कसरी लेख खोज्ने बेला खोज इन्जिनको फाइदा लिन सक्दछन्। हाम्रो सिफारिशहरू यस इन्फोग्राफिकको बराबरीमा थिए सामग्रीभर्भ.
यी व्यक्तिहरूले लेखिरहेका लेखहरू पहिले नै अविश्वसनीय थिए - त्यसैले हामी सुधारको लागि दुई मुख्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित भयौं।
विकास अचम्मको शीर्षक त्यो पाठकको भावनामा ट्याप गर्दछ र उनीहरूको जिज्ञासालाई क्लिक गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा स्टक गर्दछ।
निश्चित गर्नुहोस् लेखकहरूले स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूको निर्मित गर्दछ विश्वसनीयता र अधिकार, तिनीहरूको सामग्री प्रचार र ब्रान्ड को लागी समग्र अधिकार चलाउँदै।
मैले पहिले भनें - एसईओ एक मानवीय समस्या हो, अब गणितको समस्या छैन। उत्कृष्ट प्रतिलिपि लेखन भनेको तपाईंको श्रोताको ध्यान खिच्ने बारेमा हो। जब तपाइँ त्यो गर्नुहुन्छ, खोज इञ्जिनहरू अनुसरण गर्नेछन्!
टैग: Copywritingखोज इन्जिन अनुकूलनSEO copywriting
२ Aw अद्भुत सामग्री मार्केटिंग उपकरण
डिसेम्बर १, २०१ 28 2013:२:2 अपराह्न
एउटा चाखलाग्दो पोष्टको लागि धन्यवाद - मलाई लाग्छ तपाईं ठीक हुनुहुन्छ, गुगलले चीजहरू त्यस्तै तरीकाले मापन गर्दैन।
आजको दिन यो एल्गोरिथ्म एकदम चतुर छ - यसले प्राकृतिक प्राकृतिक सामग्री नै मनपर्दछ।
मलाई लाग्छ कि एसईओ महत्त्वपूर्ण रहनेछ (व्यवसायका लागि) जबसम्म गुगल मास्टर कम्प्युटरहरू हुन्छन् जुनसँग एआई हुन्छ र सोच्न सक्छ - तब हामी जागिरबाट बाहिर भयौं!
Google+ पनि अधिक महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ - लेखकत्व सबै तरिकाले।
अप्रिल 2, 2014 मा 12: 26 एएम
ठीक छ, तपाईले साझेदारी गर्नु भएको सबै सुझावहरू शानदार र वास्तवमै काम गर्दछन्। मेरो प्राकृतिक स्वास्थ्य कपीराइटर-माइकल जोन्सले त्यस अनुरूप SEO प्रतिलिपिहरू सिर्जना गर्दा मसँग यसको बारेमा विचार थियो। तपाईंको प्रतिलिपि लेखकलाई काममा लिनु एक राम्रो निर्णय थियो, किनकि म एकै छाना मुनि दुबै प्रतिलिपि अधिकार र मार्केटिंग सेवाहरू पाउँदैछु। शुल्कहरू व्यावहारिक छन् र अनुभव व्यापक छ।